အေးမြဖြူ ကိုအမုန်းစကားပြောခဲ့တယ် လို့ လူမှုကွန်ယက် မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့အပေါ် ပွင့်နဒီေ မာင် ပြန်ရှင်းပါပြီ – Shwewiki.com
အေးမြဖြူ ကိုအမုန်းစကားပြောခဲ့တယ် လို့ လူမှုကွန်ယက် မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့အပေါ် ပွင့်နဒီေ မာင် ပြန်ရှင်းပါပြီ
ပွင့်နဒီမောင်ဟာ ဝါရင့်အနုပညာရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်….စိတ်ထားကောင်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက လက်ခံအားပေးကြပါတယ်…ယခုနောက်ပိုင်း MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လာပြီး သူမြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေသူပါ လတ်တလောမှာ ပွင့်နဒီမောင်ဟာ Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲဝင် အေးမြဖြူကို မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ထားတဲ့ သတင်းဟာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ပြန့်နှံ့နေတာပါ….ဒီလိုသတင်းတွေ ပြန့်လာတာကြောင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုကနေ ပွင့်နဒီမောင်က ယခုလို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်
အားလုံးကို အမှန်တရားသိစေချင်တာကြောင့် မီဒီယာတွေကို ဖြေဆိုဖို့ လာခဲ့တာပါဆိုပြီး ပွင့်နဒီမောင်က ဆိုပါတယ်…..အေးမြဖြူကိုကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးကြည့်လဲမကြည့်ရဘူး လာဆဲတဲ့လူတွေကိုလဲတရားဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ပို့စ်ကို အနီရောင်ပရိုဖိုင်ပုံနဲ့ တင်ထားတာဟာ သူ့အကောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်…. ဒါဟာ အကောင့်အတုဖြစ်ပြီး အဆိုပါအကောင့်တုကနေတစ်ဆင့် ယခုပြောတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ပြန့်နှံ့ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်….. ဒီလိုမျိုးအကောင့်အတုက တင်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိမိတင်တာမဟုတ်ကြောင်းကို ညီမလေး အေးမြဖြူနဲ့ အေးမြဖြူကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံး အမှန်တရားကို သိစေချင်လို့ ခုလိုရှင်းပြတာပါလို့ ပွင့်နဒီမောင်က ဆိုခဲ့ပါတယ်
မိမိရဲ့ အကောင့်အစစ်ကိုလည်း မီဒီယာတွေက သိကြပြီး ယခုလို အေးမြဖြူကိုဝေဖန်တဲ့အကြောင်းရေးခဲ့တဲ့သူဟာ အကောင့်အတုသာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးကို သိစေချင်တယ်လို့ ပွင့်နဒီမောင်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကဲ…ပရိသတ်ကြီးရေ အေးမြဖြူကို မကြိုက်ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့တာဟာ ပွင့်နဒီမောင်နာမည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အကောင့်အတုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ခုလောက်ဆို သိလောက်ပါပြီနော်….ပွင့်နဒီမောင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း အောက်မှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်…
Video Source : Cele Connections
Video ဖိုငျကို အောကျဆုံးမှာတှဲပွီး တငျပေးထားပါတယျ
ပှငျ့နဒီမောငျဟာ ဝါရငျ့အနုပညာရှငျသရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈပါတယျ….စိတျထားကောငျးပွီး ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ လကျခံအားပေးကွပါတယျ…ယခုနောကျပိုငျး MRTV-4 ဇာတျလမျးတှဲတှမှောလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျလာပွီး သူမွတျနိုးတဲ့ အနုပညာလမျးကို လြှောကျလှမျးနသေူပါ လတျတလောမှာ ပှငျ့နဒီမောငျဟာ Myanmar Idol Season4ပွိုငျပှဲဝငျ အေးမွဖွူကို မကွိုကျဘူးဆိုပွီး ဝဖေနျထားတဲ့ သတငျးဟာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ပွနျ့နှံ့နတောပါ….ဒီလိုသတငျးတှေ ပွနျ့လာတာကွောငျ့ အငျတာဗြူးတဈခုကနေ ပှငျ့နဒီမောငျက ယခုလို ပွနျလညျဖွရှေငျးလာခဲ့ပါတယျ
အားလုံးကို အမှနျတရားသိစခေငျြတာကွောငျ့ မီဒီယာတှကေို ဖွဆေိုဖို့ လာခဲ့တာပါဆိုပွီး ပှငျ့နဒီမောငျက ဆိုပါတယျ…..အေးမွဖွူကိုကွိုကျလဲမကွိုကျဘူးကွညျ့လဲမကွညျ့ရဘူး လာဆဲတဲ့လူတှကေိုလဲတရားဆှဲမယျဆိုတဲ့ပို့ဈကို အနီရောငျပရိုဖိုငျပုံနဲ့ တငျထားတာဟာ သူ့အကောငျ့မဟုတျဘူးလို့ သူကပွောပါတယျ…. ဒါဟာ အကောငျ့အတုဖွဈပွီး အဆိုပါအကောငျ့တုကနတေဈဆငျ့ ယခုပွောတယျဆိုပွီး သတငျးတှေ ပွနျ့နှံ့ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ….. ဒီလိုမြိုးအကောငျ့အတုက တငျခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး မိမိတငျတာမဟုတျကွောငျးကို ညီမလေး အေးမွဖွူနဲ့ အေးမွဖွူကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံး အမှနျတရားကို သိစခေငျြလို့ ခုလိုရှငျးပွတာပါလို့ ပှငျ့နဒီမောငျက ဆိုခဲ့ပါတယျ
မိမိရဲ့ အကောငျ့အစဈကိုလညျး မီဒီယာတှကေ သိကွပွီး ယခုလို အေးမွဖွူကိုဝဖေနျတဲ့အကွောငျးရေးခဲ့တဲ့သူဟာ အကောငျ့အတုသာဖွဈကွောငျး အားလုံးကို သိစခေငျြတယျလို့ ပှငျ့နဒီမောငျက ရှငျးပွခဲ့ပါတယျကဲ…ပရိသတျကွီးရေ အေးမွဖွူကို မကွိုကျဘူးလို့ဝဖေနျခဲ့တာဟာ ပှငျ့နဒီမောငျနာမညျနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ အကောငျ့အတုသာဖွဈတယျဆိုတာ ပရိသတျကွီးတို့လညျး ခုလောကျဆို သိလောကျပါပွီနျော….ပှငျ့နဒီမောငျကိုယျတိုငျရှငျးပွထားတဲ့ အငျတာဗြူးဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုလညျး အောကျမှာ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော…
တက္ကသိုလ် စတက်တော့မယ့် Fresher လေး များ သိထားရမယ့် အချက် (၅) ချက်
မရှိ လို့ ဈေးရောင်းစား တာ စည်ပင် ကဖမ်း ပီး ဗန်းပါ ထုချေခံရ တဲ့ အဘိုးရဲ့အဖြစ်